पल शाहको प्रश्न 'कलाकारले मेहनत गरेको पारिश्रमिक कति बर्षमा पाएका छन् ?' - Filmy News Portal Of Nepal
फिल्म क्षेत्र यतिबेला कोरोना भा’ईरसका कारण च’लायमान छैन् । न फिल्मको सुटिङं भएको छ न त् फिल्म रिलिज नै भएका छन् । फिल्म क्षेत्रमा आश्रित धेरै व्यक्तीहरु यतिबेला प्रत्यक्ष/परोक्ष स’मस्यामा छन् ।
यो बि’षम परिस्थीतिमा बिशेषगरी फिल्मका प्राविधिकहरु स’मस्याबाट गुज्रि रहेका छन् । हनुत् फिल्म निर्माताहरुको पनि लाखौं करोडौं लगानी कम्प्युटरमा थ’न्किएर बसेको अवस्था छ । कलाकारहरु बे’रोजगार जस्तै भएका छन् । अब कहिले देखि फिल्म क्षेत्र पूर्ण रुपमा संचालन हुनेछ त्यो यकिन साथ भन्ने अवस्था छैन् ।
यही समय बलिउडकाका धेरै सेसिलब्रेटीहरु डिप्रेसनमा पुगेर आ’त्मह’त्या गर्न थालेका छन् । हालै अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले बलिउडमा ना’तावादका कारण ए’क्लिएर डि’प्रेसनमा गई आ’त्मह’त्या गरेको भनिएको छ । ना’तावाद, ग्रु’पिजमको बहस नेपालमा पनि शुरु भएको छ ।
कोही ना’तावादको पक्षमा बहस गर्दैछन् त कोही ना’तावाद र ग्रु’पिजमको बिरुद्धमा उत्रिएका छन् । भनिन्छ, फिल्म क्षेत्रमा बिक्न अनि बिकेपछि टि’क्न निक्कै गा’ह्रो हुन्छ । यतिबेला निक्कै रुचाईएका अभिनेता हुन् पल शाह । ‘म यस्तो गीत गाउंछु २’ रिलिजको तयारीमा रहेका पललाई पनि ल’क’डाउनले सताएको छ ।
सामाजिक संजाल फेसबुकमा पलले ना’तावाद र ग्रु’पिजम भन्दा फरक बिषयलाई उठाएका छन् । जुन आम नेपाली कलाकारको कथा व्य’था हो । पल लेख्छन् : फिल्मी क्षेत्रमा Nepotism(ना’तावाद्), कृ’पावाद्, ग्रु’पिजम अनि De’pression, Su’icide को कुरा चलिरहदा अर्को एउटा कुरा उठाउन मन लाग्यो ।
– के तपाईंले परीश्रम गरे अनुसार समयमा आफुले पाउनु पर्ने पारिश्रमिक पाइराख्नु भएको छ ?
– के तपाईंले आफुले गरेको फिल्मको पैसा पाउन बर्षौ बर्ष सम्म Director, Producer सँग दुई हात जोड्नु परेको छ ?
– यो फिल्म गरेर आएको पैसाले अर्को ठाउँबाट ल्याएको ऋण तिरौला भन्ने सोच गरेको कलाकारलाई त्यहि फिल्मको पैसा पाउन बर्षौ बर्ष कुर्नु पर्दा त्यो कलाकारको दिमागमा के असर पर्ला ?
– आफ्नो फिल्मको Agreement अनुसार producer सँग payment माग्दा ” यो हाम्रो फिल्मले सोचेको जस्तो ब्यापार गरेन त्यसैले यो पैसा अहिले दिन सक्दैन म, यदि ५०% Discount (Consider) गरिदिने भए गर नभए पछी बिस्तारै दिउला भनेर २-३ बर्ष झुलाउदा त्यो कलाकारको मन म’स्तिस्कमा कस्तो सोच आउला ?
र त्यहि Producerले भन्छ “हाम्रो Nepali Film Industry लाई बचाउनु छ्, एकले अर्कोलाई सपोर्ट गरी अघी बढ्नु छ । ”
हो, अब हामी सबैले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ र त्यो व्यक्ति De’pression को सिकार हुनु भन्दा पहिले नै सबैको सामु यो कुरा राख्नु पर्ने जरुरी भएको छ र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।